Ogaden News Agency (ONA) – Janaral Tigree Ah oo Aad Udhaliilay Kooxda TPLF.
Janaral Tigree Ah oo Aad Udhaliilay Kooxda TPLF.
Posted by Dulmane	/ August 21, 2018
Janaral howlgab ah oo udhashay qoomiyada Tigreega ayaa kadigay in maamulka TPLF ee talada Gobolka haya ay mar kale kusoo laabtaan xilka ay hada xooga kuhaystaan waasida uu hadalka udhigay e.
Janaral Sarge oo kamid ahaa saraakiishii maamulkii hore ee wayaanaha mucaaradka ku ahaa ayaa sheegay in loobaahan yahay in laga qaybqaato isbadalka kasocda guud ahaan wadanka isagoo kutaliyay in isbadalka lahirgaliyo.
Janaral Sarge ayaa sheegay in shirwaynaha lafilayo ee ururka TPLF aan mar kale dib loodoiranin xubnaha kasoo horjeeda maamulka cusub ee Dowlada Itoobiya, wuxuuna Janaral ku kutaliyay in ay dadka hor dhaafaan.
General Sarge ayaa kamid ah saraakiil dhowr ah oo Tigree ah kuwaas oo siwayn uga soohorjeeda nidaamka Kooxda TPLF udagan ee Gumaysiga iyo kala qoqobka kudhisan, wuxuuna Janaral ku falaago ahaa mudo dheer.
Iskusoo wada duub oo waxaa sooxoogaysanaya fikirka ah in aysan dib usoolaabanin kooxdii dhiiga shacabka kamushtari jirtay ee TPLf iyo xukunkoodii faasidka ahaa, waxaana lagu talinayaa in wakhti lasiiyo maamulka cusub ee talada lawareegay.